कोरोनाका कारण झापाका १ वृद्धको मृत्यु
झापामा कोरोना संक्रमणका कारण ७७ वर्षीय पुरुषको बुधवार राति मृत्यु भएको छ ।
झापाको दक्षिणी क्षेत्र भारतसँग सीमा जोडिएको झापा गाउँपालिका–६ निवासी वृद्धको मृत्यु भएको हो ।
उनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मण विश्वकर्माले बताए । उनको शव स्थानीय रानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको छ ।
उनका छोरा झापाको बिर्तामोडबाट गत भदौ २४ गते बुवा भेट्न आएका थिए । त्यसपछि असोज ३ गते आएको छोराको पीसीआर रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । छोराले भेटेर गएपछि पितामा सामान्य ज्वरो र रुघाखोकीको लक्षण देखिएको थियो ।
क्रमशः रुघाखोकीले च्याप्दै गएपछि गाउँपालिकाले ३ दिनअघि सोही क्षेत्र आसपासका ३२ जनाको स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण गरिएकामध्ये अन्य सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि वृद्धको भने पोजेटिभ आएको विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्यामा रहेका वृद्धको बुधवार राति निधन भए पनि रिपोर्ट भने बिहीवार बिहान मात्र आएको बताइएको छ ।
कार्यालय भएकै स्थानमा टीका, शक्तिपीठमा सुनसान
दशैंकै दिनमा कोरोनाको बज्रपात - तनहुँका ५० वर्षीय...
बाढीपीडितको त्रिपालभित्र दशैंका नाममा ‘दशा’ !
सप्तरीमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
कलाकार मनोज गजुरेलमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
खानपानमा ख्याल नपुग्दा टीकाको दिन अस्पतालमा...
सह गोत्रीसँग किन गर्नु हुँदैन बिहे
छुटाउन नहुने यी हुन् ५ फलफूल
जान्नुहोस् कागती पानीका १२ फाइदा
८ घण्टाभन्दा कम सुत्नेलाई डिप्रेसनको खतरा !
जाडोमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने खतरा, कसरी रहने सुरक्षित